Burma Partnership » CSOs Forum Statement on Upcoming Multi-party General Elections
By Civil Society Organizations Forum • October 18, 2015
[Myanmar CSO Forum Coordination Committee comprises of many prominent civil society organizations’ leaders and was formed during the Civil Society Organization Forum held in October 2014. Civil Society Organization Forum was one of the most comprehensive events, participated by more than 650 representatives from 257 organizations and networks from around the country as well as the Thailand-Burma border.]
National Network for Education Reform (NNER) (Comprised of more than 200 member organizations)
Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) (Comprised of 449 member organizations)
Lands in Our Hands (LOH)
(၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု အထမ မြောက်ခြင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု၏အခြေခံလူနေမှုဘဝများ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနိမ့်ကျနေခြင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့်လယ်သမား များ၏ တောင်းဆိုမှုများ လျစ်လျှူရှုခံနေရဆဲဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခဲ့ခြင်းစသည့် နောက်ခံအခင်းအကျင်းများဖြင့် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံနိုင်ငံရေးပြဿနာများနှင့် အကြပ်အတည်းများကို ဗျူဟာမြောက် အဖြေရှာရာတွင် ထွက်ရပ်လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဟု မိမိတို့မှအခိုင်အမာယုံကြည်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအားဖြင့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှသာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အလားအလာ အစပြုခြင်းဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးနှင့်လူမျိုးရေးကိုအသုံးချ၍သော်လည်းကောင်း၊ မသမာသော၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောနည်းလမ်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကို လုပ်ဆောင်မည့် အလား အလာများ၊ လုပ်ရပ်များအပေါ် နိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း တရားဝင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့လင့်ကစား၊ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များမှာ ရပ်တန့်လျော့ပါးလာခြင်းမရှိသည့် အပြင် ပိုမိုစိုးရိမ်ရသည့်အနေအထားများကို မြင်တွေ့လာနေရသည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအစိုးရတွင်လည်းကောင်း၊ အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းသည့်အာဏာရ ပါတီတွင်လည်းကောင်း လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အာဏာရရှိရေးကို အကြောင်းပြုလျက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မတူကွဲပြားမှုများအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းခြားနားသွားစေရန် စေ့ဆော်မည်ဆိုလျှင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသော အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို စစ်စစ်မှန်မှန်လိုလားသည်ဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်ရန် ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်သည့် အလျောက် လက်ရှိအစိုးရ၊ အာဏာရပါတီ နှင့် ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ပါတီများ၏ ရပ်တည်ချက်များ၊ သဘောထားများသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသာဖြစ်သည်ဟုလည်း သုံးသပ်မိပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ မလျော်ကန်သောကိစ္စရပ်များကိုသာမက တိုင်းရင်းသားပါတီများအပါအ၀င် အတိုက် အခံနိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ် ရွေးကောက်ပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မလျော်ညီသောပြုမူပြောဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့်၊ မသိကျိုးကျွံပြုနေခြင်း၊ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရန်ပျက်ကွက်ခြင်းစသည်တို့သည် ကော်မရှင်၏ကြားနေမှု၊ သမာသမတ် ကျမှု၊ ဘက်မလိုက်မှုတို့ကို ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ချေလျော့နည်းလာစေမည့်အပြင်၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ၏ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုအား ကိုယ်စားပြုနိုင်မှုအပေါ်တွင်လည်း ဆိုးကျိုးများသက် ရောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ Women’s Organizations Network (WON)
Tags: 1988 Uprising, 2015 Elections, ASEAN, Civil Society Organizations Forum, Forum for Democracy in Burma, Human Rights, Lands in Our Hands, Myanmar Alliance for Transparency and Accountability, National Network for Education Reform, Network for Democracy and Development, Union Election Commission, Women's Organizations Network